SAMOTALIS: DIMUQURAADIYAD:Dawlad masuul ah oo dadka matasha Q3
Haddaba bal maskaxdaada ku nasi halganka dheer ee xaqa cod bixinta loo soo maray, taas ag dhig kan bulshadeena. Sideey se tahay fahamka dadweynaheenu u yaqaan shaqada barlamaanka iyo hawsha dawladda. Ma yihiin dar u arka dawladdu shaqaale iyaga u shaqeeye. Miyeyna waajib ahayn in garaadkooda siyaasi iyo aqoontooda nolaleed kor loo qaado.Weli ma maqasheen dood barlamaan oo reer hebel dano gaar ah oo ay leeyihiin lagu hayo. Maxaa inoo diidan inaan ummaddena jahliga ka saarno. Waxa cad in in badan oo inaga tirsani aqoon darrada dadweynaha inay ka fa’iideystaan si guracan, ooyna marna rabin in dadka dariiqa toosan loo tilmaamo. Waa se mid lama huraan ah. Oo haddii laga gaabiyo, waqtiga ayaa dadka tababari doona, oo maalinbaa iman indhaha dadweynahu furmi doonaan, oon dantooda laga laaluushi karin si ay u fuliyaan dan qof iska leeyahay. Aayaan darrada jirtaa waa wakiilo aan garan mushaharka ay qaataan sida ay ku timid iyo cidda hawshan u dhiibatay.
Aynu noqono mucaa’rid iyoi muxaafidba dar wanaaga ku tartama, dar danta guud ilaaliya, iyo qaar aan aqoon darrada iyo jileeca dadkeena ka danneysan. Aynu ogaano inaynu Islaam nahay, xisaabta aakhirna ina sugeyso. Illaahay hayna tuse xaqqa, haynaga dhigo kuwa u gargaara cadaaladda.